Thursday April 30, 2015 - 14:17:58 in Maqaallo by Super Admin
Waxa ay noqotey Xukuumad aan u-sahan tegi karin oo aan doojin karin qaranka yar ee raad qaadka ah ee raranka saarmey. May noqon Xukuumad ummadii soo dooratey ee diratey wada deeqda oo udhex noqota oo la mahadiyo, may noqon Xukuumad ku dhisan sinaan iyo cadaalad, May noqon Xukuumad Shacabka Somaliland ka dhigta ul iyo diirkeed hal qoys oo wax walba wadaaga sida ilaha dhaqaalaha, kheyraadka dalka, mansabka maganta, moorada iyo muqunada.
Waxay xididada u-siibtey Xukuumadani Arkaantii Somaliland ku taagneyd oo ay ugu horeyso talo wadaagii, xalibnaantii iyo xilgudashadii dawladnimo, Waxay sii gudhisey oo hoos udhigtey rajadii iyo kalsoonidii hankii shacabka JSL.Waxa ay caad iyo ciiro qarsoon saartey ictiraaf raadintii. Waxaana ay gol-jilicda ka wareentey oo huryada udhaawacdey si ay udhuuqdo ictiraafkii JSL ku taameysey mudada dheer ee 24-ka sanadood la higsanaayey kaas oo hada iska noqday himbiriirsi iyo hal hays qudha.
Waxaa taa ka sii daran hanyaraanta, hadaaqa iyo halaan halka hawl-wadeenadeeda iyo masuuliyiinteeda oo iyagu ku ganacsada mansabka kuna ugaadhsada xilalkooda kuwaas oo ku qanacsan mar walba waxoogaaga yar ee faraha guudkooda ah ee quudhsiga ah ee ay ka helayaan mashaariicda ay maamulaan iyaga oo mar walba ka dhinbiil qaadanaaya dhitada waayo aragnimadooda uu musuq-maasuqu hadheeyey ayaa waxay baab’abiiyeen isiradii isxisaabinta iyo xalibnaanta ee dawladnimo waxaana ay si cad u baal mareen tisqaadkii maareynta iyo maamul wanaaga ee qaranimo.Waxay xukuumadani ku fashilantay hirgelintii ku dhaqanka habkii maamul wanaaga iyo hansami usocodkii hawlihii dawladnimo ka dib markii musuqii iyo cadaalad daradiiba ay xadkii dhaaftay.
Waxaa laga filaayeyXukuumada Siilaanyo in golihiisa wasiiradu ay wadanka uwada noqdaan Hu,Hoy,Hayin,Hawlqabad iyo Hormood Qaran. Waxaa laga filanaayey in ay noqdaan gole aqoon uleh mansabkooda, maamul-wanaaga, macnaha qaranimo iyo milgaha dawladnimo. Waxaa laga filanaayey gole shacabka unoqda Dar,Yeel iyo Weel waraabiya oo ummadda wax ku soo kordhiya. Waxaa laga filaayey gole noqda Mideeyeyaal, Jideeyeyaal iyo Jiheeyeyaal shacabka Somaliland gunta ka tola oo tubta usaara toobiyaha toosan. Laakiin waxay noqdeen nasiib daro, duul ay ka masaxantay oo ka min guuray waayihii taariikheed iyo tagtadii shalay soo martay shacabka Somaliland. Waxaa la isku raacay in ay dhex-boodayaan duul qaran dumis ah oo qabyaalad ku naax ah oo naca, naceyb iyo naxli huursani ragaadiyey. Waxaa iyana la daalacday in ay ku jiraan qaar isu dhibi lista oo luqun-jibaadh, laacdan, laab-lakac iyo labac kaw iskaga siiyey.
Guntii iyo geba-gebadii qormadan Weli Somaliland may soo marin Xukuumad tan oo kale ah oo Daani leh, Diir baas leh, Degel meer leh, Dabo-ka nuug leh oo degley leh oo jini boqor leh kuwaas oo hadana Dilaaliin wada ah oo dhegta ku wada haya sanqada Zaadkooda iyo sidii loo Dilaali lahaa hantidii maguuraanka aheyd ee shacabka baahan .
Alleh ayaa Mahada iyo Mudnaanba leh,
Wa-Laahum-Aclam-Waa bilaahi Tow-fiiq
Waa Qalinkii : A/Rahman Fidhinle
Intensive ED PDA